Iphrinta yeThreythi yeThethi ehle kakhulu China Manufacturer
Incazelo:I-2018 yokugqoka i-T Shirt Printer,I-Hot Sale A3 T Shirt Printers,Iphrinta yeThreythi yeThethi ehle kakhulu
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > I-T Shirt Printer > Iphrinta yeThreythi yeThethi ehle kakhulu
Iphrinti yeTheythi ephezulu ye-Quality Quality ithethukiswe ukuze ikwazi ukuthola ihembe lekhwalithi engcono kakhulu ngesivinini esiphezulu sokuphrinta nokusebenza okuzinzile. Ingasetshenziselwa ukuphrinta ihembe elimhlophe kanye nekhati lombala kufaka ihembe elibomvu, elimnyama, lombala obomvu, njll. Sicwaninga futhi sithuthukise iphrinta ye-2018 ye-Garment T Shirt ngokwethu, singenza i-OEM design. Kulula kakhulu ukusebenza futhi ufunde. Sinikeza insizakalo eyodwa kokuyodwa emva kokudayiswa, eziningi onjiniyela endaweni yethu. Amashicileli e-Hot Sale A3 T Shirt akwenziwa e-aluminium ukuqinisekisa ukuthi umshini usebenza kahle futhi ulwa nomonakalo ngesikhathi sokubeletha. Ngebuchwepheshe obuphezulu, singaphrinta kwihembe, isikhwama, izicathulo, i-cap, sock, indwangu nemikhiqizo ehlobene .
Isixazululo esiphezulu sama-5760 * 2880 * 2880 singakuvumela ukuthi uphrinte kunoma iyiphi impahla enomphumela omuhle. Iphrinta yeThreythi yeThethi ehle kakhulu
I-2018 yokugqoka i-T Shirt Printer
I-2018 yokugqoka i-T Shirt Printer I-Hot Sale A3 T Shirt Printers Iphrinta yeThreythi yeThethi ehle kakhulu Phrinta ngqo kwi-T Shirt Printer I-T-Shirt yokugqoka i-Garment Printer ngqo I-A4 Size T Shirt Printer I-Dtg Flatbed T Shirt Printer I-Diy Direct To T Shirt Printer